अलौकिक त्रिगजुर शिवालय – हिमाल न्युज
अलौकिक त्रिगजुर शिवालय
पाशुपत क्षेत्रस्थित गौरीघाटबाट उत्तरतर्फ लागेपछि करिब दुई सय मिटरको दुरीमा दायाँपट्टि विशाल बसाहाको मूर्ति देखिन्छ। पशुपतिनाथ अघिल्तिर विराजमान नन्दीको झल्को दिने उक्त बसाहाको मुखाकृति गाईको र शरीर नन्दी स्वरूपमा छ।
छेउमा पुगेर हेर्दा बसाहाको पेटमा अवस्थित दक्षिण फर्किएको ढोकाबाट गर्भगृहमा स्थापित पञ्चमुखी शिवलिंगको मूर्ति देखिन्छ। बसाहाको ढाडमाथि ब्रह्मा, विष्णु र महेशको नाममा अलगअलग तीन विशाल गजुर बनाइएको छ। साथै माथिबाट तलतिर झरेको विशाल नागसहितको शिखाभाग पनि छ।
यो संरचना बालज्ञानी गुरु आदित्यको संकल्प र डिजाइनमा नवनिर्मित त्रिगजुर शिवालयको हो। अन्तर्चेतनाबाट प्रस्फुटित ज्ञान र मनोकांक्षालाई साकार रूप दिन गुरु आदित्यले कुनै दिन लेखेका थिए, ‘म एउटा अद्भुत र अलौकिक मन्दिर निर्माण गर्न चाहन्छु। तिमीहरू सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ। जुन मन्दिरले देश र हामी सबैलाई विश्वमा चिनाउनेछ।’
मन्दिरको शिलान्यास दुई वर्षअघि भएको थियो। डा. राजु अधिकारी भन्छन्, ‘यो मन्दिरको सम्पूर्ण कलात्मक डिजाइन बालगुरु आदित्यको हो। योग र साधनापछि उहाँले विभिन्न समयमा मन्दिर निर्माणको योजना निर्देशन गर्नुभएको थियो। यहाँ स्थापित पञ्चमुखी शिवालयलाई बालज्ञानी गुरु आदित्यले पशुपतिनाथको सखाका रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ।’
आठ वर्षको अबोध बालकको संकल्प र डिजाइनमा यति ठूलो अनुष्ठान आफैंमा ठूलो उपलब्धि भएको विराटनगरका हृदयराम भट्टराई बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘आदि गुरुमा दैवी गुण छ। उहाँकै डिजाइनमा बनेको मन्दिर अन्त कतै देखिएको मात्र होइन सुनिएको पनि छैन। यो विश्वकै अनुपम उदाहरण हो।’
कीर्तिपुरबाट अनुष्ठानमा आएका कृष्णराज अर्याल बालगुरु आदित्य अन्तरज्ञानी भएको बताउँछन्। ‘अधिकांश महात्मा र ज्ञानीहरू विद्या आर्जन र अनुसन्धानपछि सिद्धि पाउँछन्। तर बालगुरु आदित्य फरक हुनुहुन्छ। उहाँमा जन्मसिद्ध ज्ञान आएको देखिन्छ। उहाँले साधना र योगको माध्यमबाटै अलौकिक ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको छ।’ अर्याल गुरुको दर्शन र ज्ञानबाट आफू प्रभावित भएको बताउँछन्। ध्यान र योगले जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको तर्क छ।
हाँडीगाउँकी श्रुति अर्याल आदिगुरुको आ श्रममा आउन थालेको धेरै भयो। गुरुसँग पारिवारिक सम्बन्ध पनि भएकी अर्याल गुरुको शक्तिबाट ज्यादै प्रभावित भएको बताउँछिन्। ‘यति कम उमेरमा यस्तो अलौकिक ज्ञान प्राप्त गर्नुु आश्चर्यजनक छ। यही ज्ञानका कारण पनि उहाँप्रति सद्भाव जागेको हो। उहाँको ज्ञानबाट प्रभावित हुनुका पछाडि योग र ध्यानलाई मान्न सकिन्छ।’
सानेपाकी जुनु जोशीले बालगुरु आदित्यबारे सुनेकी मात्र थिइन्। अनुष्ठानको सुरुवाती दिनबाटै सहभागिता जनाएकी जोशी झन् प्रभावित भएकी छन्। उनले भनिन्, ‘मैले गुगल ब्वाई भन्ने सुनेकी थिएँ। उहाँ त भगवान् जस्तै शक्तिशाली हुनुहुँदो रहेछ। उहाँका लेखोट पढ्न पाएपछि म छक्क परें। कुनै औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त नगरेको बच्चाको क्षमता कसरी यति धेरै हुन सक्छ ? ’
डा. अधिकारीका अनुसार बालगुरु आदित्य सामान्य व्यक्तिले जस्तो तत्काल लेख्न सक्दैनन्। अधिकारीले भने, ‘बायाँ हातको माझी र चोरी औंलाले च्यापेर लेख्नुहुन्छ। त्यसबेला उहाँलाई सहयोग चाहिन्छ। लेख्न मन हुँदा संकेत गर्नुुहुन्छ। उहाँ हाउभाउबाट पनि संकेत गर्नुहुन्छ र ज्ञानका कुरा लेख्नुहुन्छ।’ गुरुले धेरै भाषामा लेख्न र पढ्न सक्ने डा. अधिकारीले बताए।
त्रिगजुर शिवालयलाई नेपालको पहिलो नमुनाका रूपमा मात्र होइन विश्वकै अलौकिक मन्दिरका रूपमा लिने गरिएको डा. अधिकारी बताउँछन्। शिवालयको प्राणप्रतिष्ठाका लागि चैत २४ देखि ॐ आदिमणि मन्त्र महायज्ञ महाअनुष्ठान चलिरहेको छ। महाअनुष्ठानको पूर्णाहूति शनिबार हुनेछ। शिवालयको प्राणप्रतिष्ठा पनि शनिबार बिहानै आठ बजेर १७ मिनेटको शुभ मुहूर्तमा गरिने आयोजकले बताएको छ। त्यसपछि मन्दिर सबैका लागि खुला गरिनेछ।
सात दिनदेखि चलिरहेको महाअनुष्ठानको आकर्षणका रूपमा विभिन्न चार वटा कार्यक्रम छन्। हजारौं साधकद्वारा भइरहेको दुई करोड आदिमन्त्र जप, एक सय आठ कुण्डीय गायत्री महायज्ञ, ॐ नमः शिवायको अखण्ड जप, हवन र २७ आचार्य पुरोहितद्वारा शिवालय प्राणप्रतिष्ठा एवं रामनवमीका दिन बाल गुरु आदित्यको व्रतबन्ध संस्कार मुख्य छन्।
ज्योतिष शास्त्र अनुसार तपाइको आजको राशिफल !
जानी राखौ यस्तो छ विभिन्न राशिलाई फाप्ने व्यापार...
ज्योतिष बिज्ञानको चमत्कार: कुन अक्षर भएका ब्यक्तिको कस्तो...
तपाईको आजको दिन शुभ रहोस !! हेर्नुस आजको...
जानिराखौं कुन राशी भएका मान्छे कति कामुक ?
पशुपतिनाथले हामी सबैको रक्षा गरुन !!! हेर्नुस २०७५...
राशीअनुसार कोसँग बिहे गर्ने र कोसँग नगर्ने !